प्रहरीको लाठी खाएका डा. खनाल भन्छन्, ‘हामी कोरोनासँग लड्ने कि प्रहरीसँग ?’ – Health Post Nepal
प्रहरीको लाठी खाएका डा. खनाल भन्छन्, ‘हामी कोरोनासँग लड्ने कि प्रहरीसँग ?’
२०७७ वैशाख ३ गते २३:५१
भिडमा एक्ला बूढाबाजे
आवाज र आवासविहीन स्वास्थ्यकर्मीको मनका कुरा
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टरहरु खाना खाएर फर्कने क्रममा प्रहरीले तीनजना डाक्टरमाथि कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
बुधबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसियसनले लाठी प्रहार गर्ने प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । कारबाही अघि नबढाए कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
बुधबार राती त्रिवि शिक्षण अस्पतालका तीन डाक्टरमाथि अस्पताल परिसरमा प्रहरीले प्रहार प्रहार गरेको थियो । सोही सम्बन्धमा एशोसियसनले डाक्टरमाथिको कुटपिट गर्नेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो ।
प्रहरीले डा. शम्भु खनाल, विकास शाह र तेजप्रसाद शाहमाथि अभद्र व्यवहार गरेको हो । तेजप्रसादको हात र ढाडमा चोट लागेको छ।
उक्त घटनाको बारेमा हेल्थपोस्ट कर्मी पुष्पराज चौलागाईंले कुटपिट भएका डा. शम्भु खनालसँग टेलिफोनमार्फत सोधखोज गरेका छन्।
डा. खनाल भन्छन :
छात्रवास नभएको कारण बाहीर डेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । खाना खाएर हामी ८ बजे क्यान्टिनबाट कोठामा पुग्न लागेका थियौँ । हामी छेउमा प्रहरीको भ्यान आयो । ३ जना सँगै हिँडिरहेका थियौँ । एक जना कान्ति बाल अस्पतालको डाक्टर हुनुहुन्थो । २ जना हामी शिक्षण अस्पतालको रहेका थियौँ ।
भिडभाड किन गरेको भन्दै भने प्रहरीहरुले सोधपुछ गर्नुभयो । हामीले खाना खाएर आएको भनेर आइडी कार्ड समेत देखायौँ । उहाँहरुले यस्तो बेलामा भीड गर्ने भन्दै ठाडो स्वरमा बोल्नुभयो । हामीले खाना खाएर पनि आउन नपाउनेँ भन्यौं । त्यसपछि प्रहरीले एकचोटी खुट्टामा लाठी प्रहार गरे । के गर्ने खोजेको प्रश्न गर्यौं । त्यसको बदलामा प्रहरी पुनः २ चोटी लाठी हान्नुभयो ।
प्रहरीले ३ जना माथि नै प्रहार गर्न खोजेको थियो तर, २ जना अगाडी भएकोले भाग्यौं । १ जना डाक्टरको दाहिने हातमा चोट लागेको छ । ढाडमा पनि प्रहार गरेको छ । शिक्षण अस्पतालमा गएर एक्सरे गरियो । तर, फ्याक्र्चर भने भएको रहेनछ ।
आइडि कार्ड देखाउँदा देखाउँदै पनि लाठ्ठी चार्ज गर्न मिल्छ ? पिट्न त पाइँदैन होला नि ? हामी कोरोनासँग लड्ने कि अब प्रहरी सँग लडेर बस्ने ? यो कस्तो प्रकारको प्रहरीको जिम्मेवारी हो ?
Tags: डा. शम्भु खनाल, नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसियसन, लाठ्ठि प्रहार